टिष्टुङको कोतघरमा के छ ? कोत दरवारका राजा को थिए ? (भिडियो रिपोर्ट) | Kendrabindu Nepal Online News
मकवानपुरको टिष्टुङ उपत्यकालाई नेपाली इतिहासमा निकै पुरानो वस्तीका रुपमा लिईन्छ । यो उपत्यका हाल थाहा नगरपालिका वडा नम्वर ६ मा पर्छ ।
यहाँको एउटा ऐतिहासिक कोतघर छ । तलेजु मन्दिरका रुपमा लिईने यो कोतघरको विशेषता भने अनौठो खालको छ । पुरातात्विक मन्दिर भए पनि यो मन्दिरको भित्र के छ भन्ने बारेमा भने अझैसम्म कसैलाई थाहा छैन । यो मन्दिरमा कर्माचार्य पुजारीले दिनहु पूजा गर्छन् । मेला पर्वमा स्थानीयले पनि पूजा गर्छन् । तर, मन्दिरको बाहिर मात्रै पूजा गरिन्छ ।
यो मन्दिरको भित्र भने बर्षमा एक दिन पुजारीले मात्रै पूजा गर्ने गर्छन् । अहिले पनि दशैँमा कोतघरमा फूलपाती राख्ने चलन यथावत नै छ । यो मन्दिरमा आचाजुले मात्रै पूजा गर्न मिल्छ । दशैको नवमीका दिन तलेजु मन्दिर सर्वसाधारणका लागि खोल्ने गरिन्छ तर त्यो मुर्ती भने लुकाईन्छ । त्यसकारण यो मुर्ती कस्तो छ भन्ने बारे अहिलेसम्म कसैलाई थाहा छैन् ।
यो मन्दिरमा चैते दशै, बडा दशैं लगायतमा गरी १० वटा बोकाको बली दिनुपर्छ । सर्वसाधारण मात्रै होईन नागरिक अगुवा र जन प्रतिनिधिहरुलाई समेत यो कोतघर भित्र के छ भनेर कुनै जानकारी छैन । कोतघरभित्र कोही पस्न नचाहनुको मुख्य कारण धार्मिक आस्था भएको वताउँछन् यस वडाका वडाध्यक्ष शशिधर सुवेदी ।
बिस्तृत रिपोर्ट भिडियोमा हेर्नुहोस्
Kot darbar, Kotghar, tistung
Prevसन्दीपको आईपीएल यात्रा, सफल की असफल ? (भिडियो रिपोर्ट)
आईपीएलको यो सिजनबाट सन्दीपले ५५ लाख रुपैयाँ पाउनेNext